I-FAQ - Ningbo WEIBO Molding&Machine Co.,Ltd.
Home > Mayelana NATHI > I-FAQ
Q. Yini i-Die Casting? Ngabe ihluke kanjani kwenye inqubo "yokusakaza"?
"Ukuphonswa kwe-die inqubo yokuphoqelela insimbi encibilikisiwe ngaphansi kwengcindezi enkulu emithanjeni yokubumba (okuyimishini eyenziwe yafa). Ukuphonswa okuningi okufayo kwenziwa ngezinsimbi ezingekho emthethweni." Kuyaziwa ngokuthi "ingcindezi yokufa kwengcindezelo" eYurophu. "Ukuphonswa kwamandla adonsela phansi" (aka "casting unomphela" e-USA naseCanada) kusebenzisa amandla adonsela phansi ukugcwalisa isikhunta.
Q. Anginakho okuhlangenwe nakho kokuqamba izingxenye zokufaka ama-die cast, futhi ngifuna ukuletha izingxenye ezakhiwe ezakhiwe ukuze zife. Yini okufanele ngiyazi?
Nayi imihlahlandlela eyisisekelo yokwakhiwa kwezingxenye zokuphonsa ngokufa:
1.Even wall wall.
2.Rou nd ni yabo bonke imiphetho namakhona.
I-3.Smooth ukuxuba nokuqhubeka kwazo zonke izici.
Sizonikela ngeziphakamiso ezengeziwe zokuqamba modif i cation ukuze uqiniseke ukuthi izingxenye zakho ziphonswa ngempumelelo.
Q. Ngabe ama-fasteners noma i-Hardware angafakwa ezingxenyeni ze-die cast?
Yebo, singabeka izikopelo ze-PEM, amantongomane, ama-fasteners, noma ama-hardware noma okufakelwa ezingxenyeni ezisikiwe.
Q. Simusha inqubo yokuphonsa ngokufa, kufanele siqale kuphi?
Ungaqala ngokunikeza imidwebo yengxenye 2D ne-3D kithi. Singakunika insiza ye- Design f noma i- Design (DFM) .
Q. Yiluphi ulwazi oludingayo ukuze unikeze isilinganiso esifanele? Ngingasithola isikhathi esingakanani isibalo?
Sicela usinike imidwebo yengxenye ye-3D CAD (efana ne-IGES, STEP, noma i-X_T). Singakwazi futhi ukucaphuna base d kwimidwebo ye-2D (ku-DWG, DXF, noma ngefomethi ye-PDF [kepha ngolwazi lwesisindo]). Futhi singangenisa amafayela we-CAD ngokuqondile kusuka kusoftware eyaziwayo ye-CAD, efana ne-Pro / ENGINEER, UGS, ne-Solid Edge. Ngaphezu kwalokho, sidinga imininingwane yokukhiqiza efakwe kwisicelo sethu sefomu lesilinganiso. Ukucaphuna i-turna ro und ngokujwayelekile kungakapheli isonto, futhi kungashesha uma kuba nezinkinga ezikhethekile zokubamba isikhathi.
Q. Ngabe amakhasimende awucacisa kanjani umbala esiwudinga opendwe ezingxenyeni zokufa ezisikiwe?
Ungacacisa umbala wakho ngokusebenzisa amakhodi wombala we-RAL noma wePantone. Uma ungenayo ikhodi yemibala, ungasithumela i-chip yemibala noma isampula yombala ukuthi size ne-chip yombala ehambelana.
Q. Yini inani lakho le-min umum oda (ama-MOQ's) wezingxenye zokuphonsa ngokufa?
Ngenxa yobungcweti bethu ngama-oda amafushane, sishintsha kakhulu ngobuningi be-oda. Izingcaphuno zethu zihlala zihlephula izintengo ngabakwa-MOQ's: isb, kungahle kube nentengo yeprimiyamu uma ama-oda angaphansi kwama-pcs ayi-3,000., Elinye elinye uma ama-oda angaphansi kwama-1,500 pcs. (lezi zinombolo ziyahlukahluka futhi ziyizibonelo nje).